Somali Business World - HOME
Somali Business World HOMEGanacsatada SomaalidaSuuqaNala soo xiriir
Xiriirkaaga Aduunka Ganacsiga WARKA
Wajiga cusub ee Somaaliya?Waa viidiyow ey hey'ada Quest-Mida ey ka soo duubtay maamul goboleedka Puntland waxeyna fariin uugu dirayaan qurba-joogta degaanka iney ka faaideystaan fursadaha ka jira dalka, taas oo ey jaa dadka qarkood ey sameyeen.
Nin kaligiis duur beeray
In ka badan 30 sano kahor, wiil dhalinyaro ah oo la yiraahdo Jaday "Molai" Payeng baa wuxuu bilaabay in uu geedo ku beero meel ciid badan agagaarka degaanka uu ku dhashay Assam, India.
Fikrado ganacsi Somaaliya ku haboon
Waa buug ey soo saartey shirkada Somali Business Consulting Agency (SBCA) wuxuuna soo koobayaa 53 fikrado ganacsi oo aan laga helin dalka iyo kuwo laga helo lakiin noocyo kale looga baahan yahay. Waxey isugu jiraan tukaamo, warshado, iyo adeegyo aad u kala duwan oo horumar iyo faaido dalka u keenaya. Buuga wuxuu ku qoran yahay af somaali waxaadna ku heleysaa emailkaaga. Waxey kaloo SBCA siineysaa caawimaad lacag la'aan ah qofki raba in uu sameysto noocyada ganacsi oo buuga ku qoran.Kala xiriir SBCA ganacsiga@yahoo.com
Sababtee baad lacagtaada dahab u galineysaaDahabka iyo xoriyadaada dhaqaaleed waa isku xiran yihiin. Marki ey maciishada kacdo, dahabka wuxuu kuu ilaalinayaa maalkaaga. Qiimaha lacagta aad bey isku badbadashaa oo lacagta aad meel dhiganeysid ma aha wax aad isku haleen kartid, lakiin dahabka qiimahiisa inta badan kor un buu u socdaa.
Muqdisho bilicdeedi oo soo noqoneysaMuqdisho oo lagu arkayo waji ganacsi cusub.Koox ganacsato Soomaaliyeed ah oo sanad ka hor dalkooda ku laabtay ayaa sameeyay shirkad la yiraahdo Al-Naciim oo digaaga iibisa.
Sifiso DabengwaAfrica's telecoms kingDabengwa, 52, waxaa loo xilsaaray jagadiisa bishi Desember 2010 kadib 11 sano oo uu shaqeynayey MTN. Wuxuu ka imaaday Zimbabwe wuxuuna soo bartay injineernimada korontada iyo MBA. Baro afka ingriiska adigoo gurigaaga jooga
Sida aan ognahay aduunka waa hormaray hadana waxyaabo badan baa fududaaday. Waxyaabahaas waxaa kamid ah waxbarashada oo hada in badan internetka laga qaadan karo, sida barashada afka ingiriiska. Korsooyinka aan bixino waxey ku baxan nooc korespondens ah oo emailkaaga baa laguugu soo dirayaa. Waxey ka kooban yihiin casharo af somaali lagu micneeyey iyo tababarkooda, graamar, videoyo iyo maqalo dhawaaqa kaa saxaya. www.englishsifudud.com Ganacsatada dumarka ah
Sara Blakely oo noqotay haweenta ugu da’da yar oo sanadkaan gasha liiska dadka ugu taajirsan aduunka, waliba ayada oona nin ama reer ka dhaxlin. Waxaa kale oo wax laga yaabo noqotay in sidaas looga lacageysan karo surweel ey dumarka hoosta ka gashadaan. Teknooliji & halabuur
IBM oo rabta in ey kordhiso wakhtiga ey gawaarida korontada ku socon karaanSi kasta oo ey Obama dowladiisa ugu dadaashay in ey bulshada Mareykanka ka dhaadhiciso isticmaalka gawaarida korontada ku socda, meyna u suurta galin in ey dad badan gawaaridaas qataan. Sababtana waa wakhtiga yar oo ey gawaaridaas korontada ku socon karaan oo ka yar wakhtiga shidaalka (100 meyl ama ka yar). Hada IBM baa rabta in ey Project 500 taas wax uuga qabato .
Dabaq 1- biyaano ah oo kuyaal xaafada Hillaac Bosaaso. Wuxuu ku fadhiyaa dhul dhan 20*20 kana kooban yahay 5 qol, 3 suuli, 3 barando iyo deyr weyn waana dhexkadhis si qurux badan loo dhisay. Qiimaha> 48-50000Nagala soo xiriir maryanruun28@yahoo.comxayeysiiska> somali_world@yahoo.com